Tsy misy mihaino e… ! | NewsMada
Risque de crues : grand Tana placé en vigilance jaune ...février 24, 2020
Nirefotra ny basy teny Malaza Andoharanofotsy: lehilahy iray naratra voatifitra teo amin’ny tendany ...février 24, 2020
Risque de crues : grand Tana placé en vigilance jaune
Nirefotra ny basy teny Malaza Andoharanofotsy: lehilahy iray naratra voatifitra teo amin’ny tendany
Tsaho nahatonga savorovoro teny Namontana: tsy mpangala-jaza akory ireo telo lahy nenjehin’ny fokonolona
Tsy misy mihaino e… !
Par Taratra sur 06/12/2019
Tsy mihatra, na tsy iainan’ny hafa tokoa angamba ka dia toa ohatran’ny hoe mandeha ho azy, tsy misy na inona na inona. Ny fijalian’ny mponin’Itaosy sy ny manodidina amin’ny tsy fisian’ny rano no tiana ambara. « Fahirano Itaosy », « Mijaly rano Itaosy », « Vonjeo, vonjeo… ! ». Ao anaty tambajotra sosialy, « facebook » sisa manovokovoka, midradradradra, mimenomenona, mampiseho ny fahatofohana sy fahakiviana tanteraka… « Misy mihaino ? », araka ny fitenin-jatovo ve ? Asa loatra re…
Ambohidrapeto, Andranonahoatra, Andramahavola, Cité des Assureurs, Ambanilalana, Ambaniala, Bemasoandro, Manjakatompo,… Itaosy e ! Tsy misy izay tsy handrenesana fitarainana. Misy no efa amam-bolana, tapa-bolana,… tsy nisy rano. Na eny amin’ireny paompy iombonana ireny izany, indrindra moa ny any an-tokantrano. Fatiantoka iray lavaka, reraka fotsiny amin’ny fiaretan-tory, fa tsy misy na indray mitete aza.
Tapa-bolana teo ho eo izay, nolazain’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Jirama fa “afaka roa andro dia hisitraka famatsian-drano madio fisotro” ny mponin’Itaosy. Izao, inona no eo ? Resaka no betsaka, fampandriana adrisa, famahanan-dalitra fotsiny. Hatramin’izao, tsy hita ihany izay vokatry ny fanamboarana ireo hoe “forazy” na lava-drano. Mbola tsy mipaka any an-tsinibe ny rano.
Asa, hatramin’ny rahoviana izao fahirano sy fijalian’ny vahoaka izao ? Ny hita aloha, efa manomboka miha-miakatra manaraka ny hafanana migaingaina ny hasosorana sy ny hatezerana. Efa tonga amin’ny hoe “Tairo amin’izay fa “trop” loatra ity” ny resaka. Aleo tsy tohizana fa sao hisy handika hoe mitarika olona hirotaka, hikomy eto. Toy ny sakoroka be any amin’ny faritra maro any Frantsa, omaly. Ireny izao no vokany rehefa leo, tofoka, boboka ny vahoaka…! Tsy misy mihaino e !
Risque de crues : grand Tana placé en vigilance jaune 24/02/2020
Nirefotra ny basy teny Malaza Andoharanofotsy: lehilahy iray naratra voatifitra teo amin’ny tendany 24/02/2020
Andro ho an’ny tenindreny: vita ny fanamarihana fa ny ezaka mila mitohy 24/02/2020
Fametrahana ho vakoka iraisam-pirenena: nahaliana an’i Jean-Yves Le Drian ny tanàna ambony 24/02/2020
Fanomezan-kasina ny teny malagasy: nivaly ny fifaninanana « Teny mamy » 24/02/2020
Jery taratra… herinandro: mbola fandaminana aloha…